Xog: Ogoow sababta uu u furmi waayay Kulankii Baarlamaanka ee Maanta. – Hornafrik Media Network
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Xukuumadda inay ka dambeysay in kooram la’aan uu u baaqdo kulankii maanta loo madlanaa ee ajandihiisu ahaa arrinta C/kariin Qalbi Dhagax iyo go’aankii Xukuumadda ka qaadatay.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadii tagay xarunta Golaha shacabka ayaa sheegay in wixii maanta dhacay ay mas’uuliyadeeda leedahay Xukuumadda, isla markaana waddooyinka si ku tala gal loo xiray.
Waddooyin dhowr ah oo magaalada Muqdisho ka mid ah ayaa saaka ay ciidamada xireen, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay.
Xildhibaan Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in Baarlamaanka oo la filayay inuu ka hadlo tallaabadii ay dowladda ku dhiibtay C/kariin Qalbi Dhagax laga hor-joogsaday, isla markaana jid walba laga xiray.
“Umadda meel kasta ay joogaan waxay sugeyaa in Baarlamanaka uu hadlo, ka doodo wixii dalka ka dhacay ee ah arrinta ay sameysay dowladda, maanta waxaa dhacday in jid walba loo fariistay in Baarlamaanka xaruntiisa la soo geli waayo, Xukuumaddana iyadaa dadka dhahayay ha saxiixina, markii xarunta la yimid”ayay tiri Xildhibaan Canab Xasan Cilmi
Sidoo kale Xildhibaan Zakariye Maxamuud ayaa sheegay in xubno ka rirsan Xukuumadda oo Xildhibaano ah ay diideen inay saxiixaan buugga diiwaanka, isagoo xusay in arrintan ay aheyd mid mas’uuliyad darro ah.
Dad badan ayaa aaminsan in hadii Kulanka Baarlamaanka uu maanta furmi lahaa in doodo adag ay dhex mari laheyd Xildhibaanada, taasna ay horseedi laheyd marka dooda la soo gaba gabeeyo in Guddoonka Baarlamaanka uu cod geliyo go’aanka Xukuumadda ka qaadatay dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax oo ahaa Sarkaal ka tirsanaa ONLF, kaasoo bishii hore loo gacan geliyay dowladda Itoobiya.